सबैभन्दा बढि जुम्ल्याहा जन्माउने गाउँ ! (फोटोफिचर सहित)-Nagarikaawaj.com
सबैभन्दा बढि जुम्ल्याहा जन्माउने गाउँ ! (फोटोफिचर सहित)
शनिबार, अशोज ११, २०७१
विश्वमा सबैभन्दा बढि जुम्ल्याहा रहेको गाउँ कुन होला ? सायद तपाइँलाई थाहा छैन होला । विश्वमा सबैभन्दा धेरै जुम्ल्याहा जन्मिने गाउँ नाइजेरियामा छ । नाइजेरियाको इग्बो ओरा गाउँमा औषत १ हजार जन्ममा १ सय ४५ जुम्ल्याहा जन्मिने गरेका छन् ।